५ बर्ष अगाडि २६ बर्षिया आ’रतीका लेले ज’ङ्गलमा ह’त्या! ब’ल्ल खु’ल्यो य’स्तो र’हस्य! – Halkhabar kura
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १५:३६
५ बर्ष अगाडि २६ बर्षिया आ’रतीका लेले ज’ङ्गलमा ह’त्या! ब’ल्ल खु’ल्यो य’स्तो र’हस्य!
२०७२ साल बैशाख १५ गते एक महिलाको लेले फैडोल सामुदायिक वनमा ह’त्या भयो। ती महिलाको श’व भने दुई दिनपछि मात्रै फे’ला परेको थियो। प्रहरीका अनुसार उनको घाँटी का’टिएको अवस्थामा श’व फेला परेको हो। श’व फे’ला पर्नेवित्तिकै ती महिलाको सनाखत हुन सकेन। जसकारण प्रहरीलाई अ’नुसन्धानअघि बढाउन कठिनाइ भएको थियो। इटहरी नगरपालिका ४ बाट ती महिलाकी बुवा सम्पर्कमा आएपछि मात्रै सनाखत भएको थियो।
उनी इटहरी घर भइ ललितपुरको चापागाउँ बस्दै आएकी २६ वर्षीया आरती परियार थिइन्। ह’त्या भएपछि प्रहरीले चापागाउँका स्थानीयसँग सोधपुछ गरे। उनीहरूका अनुसार त्यसदिन आरती एक्लै गएकी थिइनन्। उनीसँग अन्य दुई जना पुरूष समेत थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूले तीन जना वनमा पसेको देखे पनि फर्किँदा भने दुई पुरूष मात्रै फर्केको देखेका थिए।
ती पुरूषहरू सिराहाका २४ वर्षीय रविकुमार यादव र आरतीका ‘श्रीमान्’ थिए। पहिचान भइसक्दासम्ममा उनीहरू भारत भागिसकेका थिए। घ’टना भएको पाँच वर्षपछि भने महानगरीय अ’पराध महाशाखाको टोलीले बिहीबार १ बजे काठमाडौंको मैतिदेवीबाट रविकुमारलाई प’क्राउ गरेको छ।
महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिपक थापाका अनुसार हत्याअघि श्रीमान् विदेशमा रहँदा आरती रविकुमारसँगै बस्दै आएकी थिइन्। प्रहरीले आरतीका ‘श्रीमान्’को पहिचान भने खुलाएको छैन। उनलाई पक्राउ गर्न अहिले रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ। ‘श्रीमान् भनिएका व्यक्तिको पहिचान अहिले नै नखुलाउँ, उनी विदेशमा छन्। उनलाई पक्राउ गर्न रेड कर्नर नोटिस जारी भएको छ,’ एसएसपी थापाले भने।
ह’त्या गरेपछि हाल पक्राउ परेका रविकुमार भारतस्थित बैङ्लोर गएर बसेका थिए। प्रहरीले बिर्सिएको हुन सक्ने भन्दै उनी ५ वर्षपछि काठमाडौं पसेका थिए। उनलाई केही दिन लगातार निगरानी गरेपछि मात्रै पक्राउ गरिएको थापाले बताए। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आरतीको ह’त्या हुनुका पछाडि परपुरूषसँग भएको सम्बन्ध प्रमुख कारण थियो। पक्राउ परेका रविकुमार र आरतीका श्रीमान् एउटै गाउँका हुन्।
श्रीमान् कतारमा रहँदा आरतीले रविकुमारसँग सम्बन्ध राखेर बस्न थालेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार यसबारेमा उनका श्रीमान् पनि जानकार नै थिए। यो कुरा रविकुमारले प्रहरीसमक्ष स्वीकारिसकेका छन्। तर उनीहरूको सम्बन्धमा तेस्रो व्यक्तिको आगमन भएपछि ह’त्या गर्ने योजना बनाएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको भनाइ छ।
‘दुबै जनालाई एकअर्कासँग भएको सम्बन्धबारे जानकारी भए पनि उनीहरूबीच दुश्मनीको भाव देखिन्न। उनीहरू एकै गाउँका छिमेकी हुन्,’ महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक एसपी ईश्वर कार्कीले भने।
आरतीका श्रीमान् नेपाल फर्किएपछि उनीहरूबीच भएको सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्न भन्दै ३ जना लेलेको वनमा पसेका थिए। त्यहीबेला आरतीले आफूलाई रविकुमारले स्वीकार्नु पर्ने बताएकाे रविकुमारकाे वयानलाई उदृत गर्दै प्रहरीले जनाएकाे छ। विस्तृत जानकारी श्रीमान् पक्राउपछि नै खुल्ने प्रहरीको भनाइ छ।
योजना अनुसार नै धारिलो हतियारको प्रयोग गरी आरतीको ह’त्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। महाशाखाले यस्ता पुरानो घटनाको अनुसन्धान गर्न अहिले विशेष टोली नै बनाएको छ। रविकुमारलाई पनि लामो समयको निगरानिपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ‘हामीले अहिले यस्ता पुराना केशहरूबारेमा विशेष टोली नै गठन गरी खोजी तलासी गर्न थालेका छौं,’ एसपी कार्कीले भने, ‘रविकुमारलाई पनि त्यसरी नै समातेका हौं।
अपराध गरेपछि जसरी पनि समातिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो।’ अहिले पक्राउ परेका रविकुमार यादवमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्न महानगरीय प्रहरी वृत्त, चापागाउँलाई बुझाएको छ। शुक्रबार जिल्ला अदालत ललितपुरबाट म्याद थप गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
Previous अब ‘५ लिटर र’क्सी, १० लिटर जाँ’ड मात्र बनाउ : काठमाडौं स’र्वोच्च अदा’लत
Next दुः’ख’द ख’बरः वि’श्वभ’री को’रोनाबाट मृ’त्यु हुनेको स’ङ्ख्या द’श ला’ख